आज पनि पर्छ कि पर्दैन त ? के छ मौसमको अवस्था ?::Nepal's Online News Portal
काठमाडौं, ७ बैशाख । देशभरका अधिकांश क्षेत्रको मौसम शनिबार सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदलीको सम्भावना रहे पनि अरु ठाउँको मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसमविदले बताएका छन् ।
पहाडी क्षेत्रका थोरै ठाउँमा अपराहन्न वा बेलुका मेघ गर्जनसहित हल्का पानी पर्ने सम्भावना छ । यस्तै चट्याङ्ग पर्ने सम्भावना पनि रहेको मौसमविदको भनाई छ ।
राति पनि पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली तथा अरु ठाउँको मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ ।